Isoftware yamahhala njengeNqubomgomo Yomphakathi Esebenzayo | Kusuka kuLinux
Okwamanje, «Estados» basebenzisa kakhulu i «Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)» ukwenza i- «Gobiernos» nezindlela zabo zokubusa, izindlela ezisebenza ngempumelelo futhi eziphumelelayo zomphakathi, izikhathi eziningi ngaphansi kwezikimu ezaziwa ngokuthi «Gobierno Electrónico» y «Gobierno Abierto».
Ngaphakathi kwale nhlangano kahulumeni emhlabeni wonke, «Software Libre» inokubaluleka okuyisisekelo, Hhayi kuphela ekwenzeni izindlela kungenzeka ngokushesha futhi esobala ngaphezulu ukwenza izinto, kodwa ngombono lilondeke kakhudlwana, futhi yangasese ngaphakathi kwesilinganiso se- «Seguridad de la Información».
1 Izindaba zeSoftware yamahhala koHulumeni
2 Izincazelo ezihlobene
2.3 Uhulumeni ovulekile
2.4 Uhulumeni we-elekthronikhi
2.5 Ipolitiki yomphakathi
3 Izinzuzo zeSoftware yamahhala njengeNqubomgomo Yomphakathi Kahulumeni
Izindaba zeSoftware yamahhala koHulumeni
Namuhla, kungashiwo kahle ukuthi ifilosofi ye- «Software Libre», kuyinto evame ukudlula ububanzi be- «Informática y la Computación» noma kwe «Tecnología» bebonke Ngakho-ke, ijwayele ukuthatha imigomo yayo iye kwezinye izindawo noma imikhakha yethonya noma yempilo, ibangela, phakathi kwezinye izinto eziningi, inkululeko nokubonisa obala ukuthi kubhekwe kakhulu emikhakheni eyayikade imelana nemibono noma imigomo enjalo phambilini.
Imikhakha efana noHulumeni, manje abafuna ukukhuluma nezakhamizi zabo ukuze bazinike ithuba lokwazi ukuthi kwenzakalani kuzo ukuphathwa komphakathi, ngendlela esobala, yokubamba iqhaza, yokubambisana, efinyelelekayo, esebenzayo kanye nezobuchwepheshe.
Futhi ngaphezu kwakho konke, kungani Lapho benza amaphrojekthi abo kanye nokuqaliswa, Izwe livame ukukudinga lokho «Desarrollos de Software» ukuhlangabezana nezimfuneko ezithile, Futhi kaningi kakhulu kubo kuholela ekusebenziseni kuphela «Software Libre» ukuvumela intuthuko yabo yangaphakathi.
Iqiniso, elizwakala kakhulu manje, emazweni athile athuthukile nasathuthukayo, lapho ukusetshenziswa kwe «Software Libre» yenziwe njenge- «Política Pública de Estado» womabili amakhompyutha wabasebenzisi bokuphatha, kanye nesisekelo sezingxenyekazi zabo zobuchwepheshe (Isikhungo Sedatha: Amaseva Nezinhlelo). Okukhulise i- «Soberanía Tecnológica» zabathile, futhi bathuthukisa amandla abo endaweni ye «Seguridad de la Información».
UMbuso uyisethi yezikhungo ezinegunya namandla okusungula izinkambiso ezilawula umphakathi, ezilawula ngaphakathi nangaphandle endaweni ethile.
Uhulumeni uyigunya eliqondisa uphiko lwezepolitiki futhi umsebenzi walo ukuphatha nokuphatha uMbuso kanye nezikhungo zawo, ukusebenzisa igunya nokuphatha umphakathi.
Kuyindlela entsha eyisibonelo nobudlelwano phakathi kwababusi, abaphathi kanye nomphakathi. Imodeli esobala, esetshenziselwa imisebenzi eminingi, yokusebenzisana ehlose ukubamba iqhaza kwezakhamizi, kokubili ekuqapheni nasekuthatheni izinqumo zomphakathi, ukuze kuvuseleleke, kukhulume futhi kudale inani lomphakathi kusuka nangaphandle kwemingcele yezikhungo zombuso. Isibonelo esichaza ukusetshenziswa kwezobuchwepheshe kwezenhlalo nakwezobudlelwano, ngakho-ke, nakho, kukhuthaza nokukhuthaza kahle isiko loshintsho ekucabangeni, ekuphathweni nasekuhlinzekweni kwemisebenzi yomphakathi.
Imodeli yokuphatha kahulumeni ebandakanya ukusetshenziswa kwe-ICT ekusebenzeni komkhakha kahulumeni, ngenhloso yokuhlinzeka ngezinsizakalo ezingcono kwizakhamizi kanye nokwandisa ukusebenza kahle, ukwenza izinto obala kanye nokubamba iqhaza kwezakhamizi.
Kuyisethi yemisebenzi (izinhlelo, amasu, izinqubo, imithetho, imithethonqubo) eyenziwe iqondiswe nguHulumeni / Uhulumeni ukufeza inhloso yomphakathi kazwelonke noma yesifunda. Le misebenzi ivame ukwenziwa ukuqongelela isikhathi eside ukubona imiphumela.
Izinzuzo zeSoftware yamahhala njengeNqubomgomo Yomphakathi Kahulumeni
Yiba neqhaza ekuqiniseni ukuzimela kwezobuchwepheshe
Khulisa amazinga emkhakheni Wezokuphepha Kwemininingwane Kahulumeni.
Thuthukisa ukusebenzisana kanye nokusebenzisana kwe-Information Systems ephethwe.
Lungiselela ukufinyelela kwesikhathi eside kwezakhamizi.
Ngempumelelo gcina i-Digital Heritage
Thuthukisa ithuba lokukhula nentuthuko yasendaweni ezindabeni zobuchwepheshe.
Zuza ukonga imali isikhathi eside kumalayisense esoftware, ukugcinwa kanye nokuvuselelwa.
Phakathi kokubaluleke kakhulu.
Ngokufigqiwe, ukusetshenziswa kwe- «Software Libre» njengoba a «Política Pública de Estado», akuyona nje umbuzo wemfashini noma izindleko, kodwa kuyisici esiyisisekelo ekwakhiweni kwamamodeli asafufusa amanje «Gobierno (Abierto y Electrónico)» ngendlela yokuthi Izakhamizi zizizwe ziqiniseka ukuthi ziyahambisana nemingcele yokusebenzisa ethembekile futhi ephephile, yabo bonke.
Futhi ukuthi lokhu kwenzeke, kuhlala kudingeka ngaphandle kokungabaza, i ukusekelwa kakhulu «altas instancias decisorias de un país», ukuze lokhu kube yimoto ukuqala izinhlelo ezidingekayo kanye ne- «Políticas Públicas de Estado» ngokususelwa ekusetshenzisweni kwe- «Software Libre» nefilosofi yayo.
Ngakho-ke, amazinga aphansi alandelanayo, kusuka kwezomthetho, ezobuchwepheshe kanye nokusebenza (abasebenzisi bezokuphatha kanye nezakhamizi) balandela imigqa edwetshiwe futhi ngomzamo wokubambisana kutholakala indawo ekahle yentuthuko kulolu daba, ikakhulukazi ukuze kuzuze i «Seguridad de la Información», okusikhathaza kakhulu namuhla.
Uma ufuna ukufunda i-athikili yakwamanye amazwe ethintekayo ehlobene nale ndaba, sikumema ukuthi ufunde le eyenziwe ngu URichard Stallman. Futhi uma kwenzeka ufuna ukunweba isihloko kancane ngaphakathi kweBlog yethu, sincoma izindatshana ezilandelayo: Isihloko sokuqala, Isihloko sesibili, Isihloko sesithathu y Indatshana yesine.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » Isoftware yamahhala njengeNqubomgomo Yomphakathi Esebenzayo
UCollabora ukhombisa imininingwane eminingi ngeMonado
ILinus Torvalds ikhetha ukumiswa kweLinux futhi iGnome neKDE kungaholela kulokhu